5 Siyaabaha la wareegay Screenshot ah ee Mac OS X (Mavericks) a
> Resource > Mac > 5 Siyaabaha la wareegay Screenshot ah ee Mac OS X (El Capitan)
The Mac OS X ayaa waxaa u fudud in ay qaataan shaashadda ka mid ah desktop computer ama suuqa kala firfircoon. Waxaad isticmaali kartaa hab oo kala duwan si ay u qabsadaan shaashada gaarka ah si waafaqsan looga baahan yahay. Arrinta No aad isticmaalayso Mavericks, Mountain Libaaxa ama qoraalkii kale ee nidaamka ka hawlgala Mac, halkan waa kooban oo dhan hababka aad u isticmaali karto in ay qabsadaan shaashada aad Macbook, Macbook laptops Pro iyo Mac.
Habka 1: Qaado kubad of Your Screen oo Dhan (Command-Shift-3)
Habka 2: qabsaday Xulashada a in sabuurad ah (Command-Control-Shift-3)
Habka 3: oo la wareegtay qayb ka mid ah Your Screen (Command-Shift-4 )
Habka 4: qabsaday Codsiga Window gaar ah (Command-Shift-4-Space bar)
Habka 5: Isticmaalka cuskato Utility ee Mac OS X
Haddii aad rabto in aad shaashadda ka mid ah shaashadda oo dhan aad Mac, sidan waa xulashadii koowaad. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si aad u qabato wax walba oo soo bandhigeen kombiyuutarka. Waxa aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in la hubiyo in qaab screen aad dhab ahaan waxa aad rabto si ay u muujiyaan in image shaashada ka. Markaas riix Command iyo wareeg badhamada waqti isku mid ah, oo ka jaftaa badhanka tirada 3. Shaashadda ayaa si toos ah kaga badbaadi doontaa desktop.
Sidaas si sax ah u shaqeeyo la mid ah sida kor ku xusan ka mid ah, marka laga reebo in shaashada uusan isla markiiba waa la badbaadin sida file ah oo aad Mac. Waxa la inoo badbaadiyay inaan sabuurad lahayd. Waxaad ku samayn kartaa adiga oo riixaya Command-shire-3 waqti isku mid ah. Markaasaa waxaa u paste barnaamijka anther si aad edit karaa wakhti dambe la isticmaalo.
Habka 3: oo la wareegtay qayb ka mid ah Your Screen (Command-Shift-4)
Waxaad shaashada karaa qayb kasta oo ka mid ah shaashadda aad Mac la habkan. Marka hore, hubi in shaashadda oo aad ku socoto in shaashada waa kor ku xusan oo dhan screens kale soo bandhigay on your computer. Markaas riix Command-Shift-4. Dabadiisna, aad dulqabo beddeli doonaa reticle ah cross-timaha yar. Waxaad riix kartaa oo jiidi si loo muujiyo meesha aad rabto in aad qaadato sawir ah. Marka aad sii daayay aad mouse, Shaashada waxaa si otomaatik ah ku badbaadi doontaa on desktop.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad la qabsato suuqa kala ama waxaa la siin, waxaad riixi kartaa ecs in ay dib ugu qabsadaan oo mar kale shaashada.
Jidka Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee qabsaday ah suuqa kala furan oo dhan codsi gaar ah. Press Command-Shift-4 oo isku mar hore. Markaas ka dhacay badhanka bar bannaan ee. Dulqabo noqon doonaa kamarad yar. Waxaa dhaqaaq shaashadda in aad rabto in lagu soo qabto, oo mar kale ka dibna tubbada bar bannaan ee. Furmo suuqa ayaa gebi codsigaaga la qabtay iyo badbaadiyey on Mac ah.
Marka aad isticmaasho utility la qabsado si aad u qabato Screenshot, u tag Codsiyada> Utilities> cuskato . Si aad u qabsadaan shaashada, la qabsado ordo, ka dibna dooran hababka ay qabtaan ee ay Ciidamada menu. Waxaa jira qaabab badan 4 si aad u doorato ka: Xulashada, Window, Screen iyo Mudaysan Screen.
Xulashada: Waxaad qabsan karo gobolka gaarka ah ee shaashadda by jiidayeen gaararkiisa ah Window: Waxaad qabsan karaa daaqad furan ee codsi gaar ah oo aad riixi aad mouse kombiyuutarka. Screen: Waxaad qabsan karaan shaashada oo dhan aad Mac, oo ay ku jiraan wax walba oo la arki karo shaashadda. Mudaysan Screen: Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad si uu u furo bedeley iyo-bedeley sub, haddii loo baahdo. Toban ilbiriqsi ka dib screen oo dhan waa la qabsan doonaa.